AutoSEO vs. FullSEO - Waa kuwee Semalt SEO Adeeggu kuugu fiican yahay adiga
Marka, waxaad ugu dambeyntii qaadatay go'aan caqli leh inaad sahamiso oo aad u isticmaasho adeegyada SEO-warshadaha hogaaminta Semalt?
Go'aankaaga waad ku mahadsan tahay, sida ugu dhaqsaha badan ayaad ugu biiri doontaa barkadda weligeed sii kordheysa ee macaamiisha faraxsan iyo qanacsanaanta leh ee ka faa'iidaystay adeegyadeena suuq geynta dijitaalka ah. Laakiin go'aankaasi wuxuu la imaanayaa mas'uuliyadda weyn ee doorashada adeegga saxda ah. Mid adiga kugu habboon adiga kuna habboon baahiyahaaga gaarka ah iyo yoolalkaaga ganacsi.
Haddii aad raadineyso inaad horumariso waxqabadka SEO ee websaydhkaaga, Semalt wuxuu soo bandhigayaa laba xirmooyin flagship ah: AutoSEO iyo FullSEO.
In kasta oo laga yaabo inaad horeba u haysatid fahan caddaalad ah waxa ku jira labadan xidhmo, weli waxaa jiri kara fursad shaki iyo su'aalo ah. Haddii aad tahay biloowga qeybta SEO, sharraxaad dhameystiran ayaa xitaa ka sii muhiim ah.
Marka, maanta waxaan qaadanaa waqti in la isbarbar dhigo labadeena iibka SEO ugu fiican. Markaad ka gudubto warbixintan isbarbar-dhigga deg-degga ah, waxaad awoodi doontaa inaad doorato xirmada ku habboon ganacsigaaga.
AutoSEO iyo FullSEO - Adeegyada Semalt ee 'Semalt'
Aynu ku bilawno marka hore inaan ka dhex baxno waxyaabaha ka kooban xirmada. In kasta oo ay labaduba ku bartilmaameedsanayaan meheradaha, waxaa jira kala duwanaan nooc kasta oo xidhmo ah. Qaybtani waxay ku siin doontaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kala duwanaanshahan.
Waa maxay AutoSEO?
AutoSEO by Semalt waa xirmo 'guryo buuxa' ah oo daboolaya waxqabadka aasaasiga ah iyo dhexdhexaadinta mashiinka raadinta kobcinta (SEO) ee ganacsigaaga internetka. Waxay olole u sameysaa websaydhkaaga waxayna fulisaa howlo dhowr ah oo bog iyo bog ka baxsan si kor loogu qaado qiimeyntaada dabiiciga ah.
Ma haysataa degel aan ka muuqan raadinta dabiiciga ah ee Google? AutoSEO waxay ku tusi kartaa sida ay u fuliso qaar ka mid ah nashaadaadyada ugu habboon ee kor u qaadista. Qaar ka mid ah waxay ku taxan yihiin hoos:
Cilmi-baarista ereyga - Baadhitaanka ganacsigaaga, warshadahaaga, iyo websaydhkaaga si aad u soo saarto liis muhiim ah oo muhiim ah tusaale ahaan weydiimaha ay macaamiishaadu ku raadinayaan mashiinka raadinta sida Google ama Bing. Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee SEO
Kor u Qaadka Bogga - Soo galitaanka ereyga furaha ee saxda ah gudaha waxa ku jira bog kasta iyo bog kasta oo ka mid ah websaydhkaaga iyo sidoo kale wanaajinta qodobbada kale ee bogga sida cinwaanada, tilmaanta meta, iyo astaamaha alt
Iskuxirka Xiriirka - Waxa kale oo loo yaqaanaa optimi-ka ka baxsan bogga, waxay ku lug leedahay soo saarista iyo baahinta waxyaabaha ku habboon websaydhyada kale iyo dib u helidda xiriirrada ku soo noqda boggaaga. Tani waxay hagaajineysaa qiimaha SEO (maamulka domainka, inta badan) boggaaga adoo ku hagaajinaya cabitaanka SEO-ga ee goobahan shabakadaada
Falanqaynta Webka - Maalin kasta, toddobaadle, bille, iyo saddex-biloodle ah ee falanqaynta websaydhka si loo fahmo cabbirro kaladuwan sida taraafikada, beddelashooyinka, iyo kaqaybgalka guud ee booqdayaashaada.
AutoSEO waxay si otomaatig ah hawlaheeda u qabataa waxayna ku siineysaa olole firfircoon oo SEO ah oo ujeedadiisu tahay kor u qaadista heerkaaga guud ee shabakadda.
Jaantus 1 - Qiimaynta xogta falanqaynta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah SEO (AutoSEO ayaa bixisa)
Muuqaal ka soocay AutoSEO iyo FullSEO waa in kii hore siiyaa natiijooyin deg deg ah. Haddii aad leedahay ganacsi fiican oo aad kalsooni ku qabtid tartan hoose, khadka tooska ah, AutoSEO ayaa natiijooyin kaaga heli kara arrimo dhowr toddobaad ah. Dareenka guud, SEO badanaa waxay ku qaadataa bilo waxyeello wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in Semalt uu sameyn doono falanqayn hordhac ah si loo fahmo sida dhaqsaha natiijooyinka ay u noqon karaan. Falanqayn faahfaahsan iyo wada-hadallada xigga ee taageerada macaamiisheena ayaa kaa caawin kara inaad la timaado jadwal adag.
Arintan, AutoSEO waa mid kufiican noocyada soosocda ee adeegsadayaasha:
Ganacsadayaasha raadinaya taageerada SEO dhowr ka mid ah ganacsigooda internetka
Bogagga wax qora iyo qorayaasha raadinaya inay soo jiitaan taraafikada / akhristayaasha
Saameeyayaasha iyo dadka caanka ku ah internetka
Qaado tusaale Vaibhar Chaurasia ee HealthKart oo u adeegsaday adeegyadeena 'AutoSEO' si uu ugu riixo mawqifkiisa guud ee boggiisa Google India. Laba bilood gudahood, waxaan awoodnay inaan hagaajinno qiimeynta ereyadiisa muhiimka ah ee muhiimka ah ee ganacsiga. "Waxaan si aad ah ugu talin lahaa kuwa bilowga ah iyo shirkadaha, ee la silcaya darajooyinka hoose iyo aragtida liidata ee websaydhkooda," ayaa ay tiri Chaurasia oo ku talineysa Semalt dhammaan bilawga cusub, shirkadaha, iyo MSMEs ee adduunka oo dhan.
AutoSEO waxay noqon doontaa xulasho weyn haddii aad ku cusub tahay adduunka SEO (ama suuq geynta dijitaalka, guud ahaan) ama aad raadineyso natiijooyin deg deg ah. Haddii aad tahay ganacsi bilow ah oo doonaya inuu si dhakhso leh uga faa'iideysto xaaladda dillaaca coronavirus , waxaan kugula talin lahayn AutoSEO.
Si kastaba ha noqotee, haddii himilooyinkaagu muddo dheer yihiin oo aad rabto inaad ku dhisto sumcad adag ganacsigaaga khadka tooska ah ee SEO, waa inaad fiirisaa FullSEO, xirmadayada A-to-Z SEO.
Waa maxay FullSEO?
Maalmahan qof walba wuxuu isu yeerayaa khabiir SEO ah. Taasi waxay noqon kartaa run haddii aad tixgeliso kaliya wanaajinta shabakadda oo aad qorto waxyaabaha ku jira si aad u hesho natiijooyin dabiici ah. Dhab ahaantii, oo waad ogaan doontaa tan, SEO-ga ayaa aad uga qoto dheer oo ka murugsan arrintaas.
Si aad ugu guuleysato olole SEO guul leh ganacsigaaga oo kugu helaya isu beddelid dhab ah (tusaale ahaan macaamiisha dhabta ah), waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto aasaaska. Waana halkaas meesha ay ku taallo fullSEO ee Semalt uu soo galo sawirka.
Nooca ugu sareeya ee AutoSEO, xirmadaan ayaa ku siineysa wax kasta oo aad ugu baahan tahay olole SEO ah. Laga soo bilaabo cilmi-baarista ereyga ee muhiimka ah ilaa la-tashiga, FullSEO waxay leedahay waxkasta oo ganacsigu u baahan yahay si kor loogu qaado joogitaankiisa internetka oo uu xoojiyo iibintiisa. Waxaan ka wada hadalnay sii kordhinta taraafikada, tilmaamaha, iyo guud ahaan haynta iyo sumcadda shabakadaada shabakadaha.
Jaantus 2 - Taageerada macmiilku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu muujiyo FullSEO marka la barbar dhigo AutoSEO
Iyada oo la adeegsaneyso fullSEO, waxaad fiirineysaa iibsi kordhay, faa'iidooyin, iyo iskaashi lala yeesho iibiyayaal saddexaad. Macaashka isku urursan adiga iyo ganacsigaag bilaha iyo sanadaha aad socodsiisay ololaha FullSEO wuxuu ku siin doonaa abaalmarinno waqti dheer. Sidaad ogtahay, dhisida degel adag oo leh awood sare maanta maantana waad kasban kartaa faa iidooyin sanado iyo sannadaha soo socda.
Waa kuwan liiska nashaadaadka muhiimka ah ee aad heli doontid marka lagu daro waxkasta oo AutoSEO bixiso:
Hagaajinta Farsamada Websaydhka - kobcinta CMS, sahaminta nidaamka, hagaajinta xawaaraha bogga, khariidadaha goobta, iyo sumadaynta GA / GTM. Dib u habeyn dhameystiran oo websaydhkaaga ah ayaa la bixin doonaa iyada oo ay weheliso xalal goyn kara oo ku baahsan SEO iyo warshadaha suuq geynta
Nuxurka - Waxkastoo u baahan walboo ka kooban - laga bilaabo websaydh boggeeda iyo baloogyada warbaahinta bulshada ilaa fidinta PR - ayaa loo qaddarin doonaa, lasoo bandhigi doonaa, lana daabici doonaa si loogu wanaajiyo qiimahaaga degel ee SEO.
La-tashiga - Haddii aad ku cusub tahay SEO, markaa waxaad u baahan doontaa la-tashi ku saabsan hab-dhaqanka ugu wanaagsan. Xidhmada FullSEO ee Semalt ayaa ku siin doonta talo soo jeedinno ku saabsan dariiqooyinka soo gudbinta tusmada, xeeladaha horumarsan iyo farsamooyinka sida jajabka hodanka ah, iyo nashaadaadyo kala duwan oo hubaal ah inay ku rogaan websaydhka bogga mid ka mid ah mashiinka raadinta aad doorbiday.
Caadi ahaan, oo leh FullSEO, waxaad ka heli doontaa qorshe loogu talagalay ganacsigaaga internetka ee eegaya sawirka weyn. Ma waxaad tahay ciyaaryahan ku cusub e-commerce ee warshadaha maxalliga ah oo durba ay buuxiyeen dhaqamo waaweyn iyo shabakado aasaasay? FullSEO ayaa kugu riixeysa dhanka midig korkooda qiimeynta khadka tooska ah.
Qaado tusaale shirkadda e-commerce ee Zanvic, oo ka faa'ideysatay adeegyadii Semalt ee fullSEO oo ay ku kordhisay taraafikada dabiiciga ah ku dhawaad 500% wax ka yar toddobo bilood. Dhamaadka lixda bilood ee ugu horreeya ololaha, Semalt wuxuu awooday inuu keeno in ka badan 150 ka mid ah furaha bartilmaameed ee 10ka sare ee Google.
Waxaa iska cad in FullSEO ay dhab ahaantii leedahay gees sare oo ka sarreeya AutoSEO isla markaana ay qaadanayso qaab guud. Laakiin markaa sidee ayaad ku ogaaneysaa haddii FullSEO ay adiga kuu tahay iyo haddii kale?
Marka la barbardhigo, FullSEO waxaa lagula talinayaa shirkadaha waaweyn, maalgalin caalami ah oo si wanaagsan loo maalgeliyo, iyo shirkadaha rajeynaya inay carqaladeeyaan warshadooda.
Kee baad dooranaysaa?
Sidaad uga jajaban karto qaybaha kor ku xusan, waxaa iska cad in AutoSEO ay tahay xirmo bilow ah oo SEO ah oo leh xaddidan howlaheeda. Sidaa daraadeed, waa mid kufiican shakhsiyaadka iyo bilawga yaryar ee raba natiijooyin deg deg ah.
Dhanka kale, Semalt wuxuu kugula talinayaa FullSEO inuu maamulo shabakadaha internetka e-commerce kuwaasoo u baahan inay ka fekeraan wax weyn isla markaana ay fuliyaan wax weyn si ay ugu guuleystaan horyaalnimada weyn kahor.
Isbarbar dhigga AutoSEO iyo FullSEO: Soo Koobid Deg-deg ah
Waan ognahay in qaar idinka mid ah ay dhaqsi u dagdagaandoonaan hagaajinta adeegga gaar ahaan inta lagu jiro muddadan xiritaanka. Marka, halkan waa si kooban oo degdeg ah oo qaab shaxeed ah. Hubi sida xirmada SEO dhameystiran ay ugu kala duwan yihiin xuduudaha.
Waqtigaan la joogo, waa inaad haysataa fikrad macquul ah doorashadaada. In kasta oo AutoSEO iyo FullSEO labaduba leeyihiin faa'iidooyin gaar ah, waa inaad sida ugu fiican u doorataa midka ku habboon baahiyahaaga.
Falanqaynta bilowga ah ee websaydhkaaga, nala soo xiriir maanta . Waxaad sidoo kale ku bilaabi kartaa dalabkaaga tijaabada AutoSEO adoo gujinaya halkan.